Our 10 Iinqobo
01 I-Intanethi yinxalenye ebalulekileyo yobomi bezi mini—undoqo kwezemfundo, unxibelelwano, intsebenziswano, ushishino, ulonwabo nakuluntu xa lulonke.
Sebenzisa iibheji ezivulekileyo ukwabelana nezakhono zakho nomdla wakho
Khangela ukuba iwebhu inegalelo njani na kwinzululwazi
Funda ngekhowudi yesosi evulelekileyo kubuntatheli
02 I-Intanethi ngumthombo woluntu oluncedo kwihlabathi lonke ofanele uhlale uvulekile yaye ufikeleleka.
Funda ngamaphulo omgaqo-nkqubo weintanethi avulelekileyo nenkqubela-phambili
Khangela indlela yokunceda ugcine iwebhu ivulekile
03 I-intanethi kufuneka ixhobise ubomi bomntu ngamnye.
Jonga indlela iwebhu enokunxibelelana ngayo nehlabathi nolondolozo lwempilo
Khangela indlela esebenza ngayo iwebhu
04 Abantu nokukhuseleko kwi-Intanethi lubalulekile yaye alunakuthathwa njengonto engenamsebenzi.
Jonga indlela esebenza ngayo iMozilla ekubekeni phambili ubungasese bakho
Funda ngenkqubela-phambili kukhuselo lobungasese neengcombolo
Funda ngaphezulu ngendlela yokuzikhusela kwi-intanethi
05 Abantu kufuneka babe nobugcisa bokumisela i-intanethi kwanamava abo kwi-intanethi.
Sebenzisa ezi zixhobo zisimahla ukufundisa iwebhu
Funda ngokuyila nokongamela isiqulatho sewebhu
06 Ukusebenza kwe-Intanethi njengomthombo woncedo woluntu kuxhomekeke kwintsebenziswano (iiprothokholi, iifomati zeengcombolo, umbandela), ukuqulunqwa kweendlela ezintsha nokuthatha inxaxheba kwiindawo ngeendawo zehlabathi.
Yongeza amazwi amatsha ukuvula ubuchwepheshe besosi
Seta ipriferensi yakho yeMusa ukufunisela
Yazi indawo yewebhu
07 Isoftwe yasimahla nevulekileyo ikhuthaza uphuhliso lwe-Intanethi njengomthombo woncedo loluntu.
Khangela indlela okwenziwayo okuvulekileyo okugcina ngayo iwebhu ifikeleleka
Funda ngendlela yokuxuba kwakhona isiqulatho ukwenza into entsha
Funda ngendlela ngokuphakamisa amandla okusebenza ewebhu
08 Inkqubo zoluntu ezingenamagumgedle zikhuthaza ukuthatha inxaxheba, ukuphendula, nokuthenjwa.
Thabatha inxaxheba kwiqonga lethu lolawulo
Funda ngendlela yokusebenzisana kwi-intanethi
09 Ubandakanyeko kwezorhwebo kuphuhliso lweintanethi luzisa inzuzo; ulungelelwano phakathi kwengeniso yezorhwebo nenzuzo kuluntu lubalulekile.
Qikelela umntu osebenza naye kwiwebhu ngebhim yokukhanya
Funda ngokwenza imithombo yewebhu nabanye
10 Ukubalaselisa inzuzo kawonke-wonke ye-Intanethi yeyona nto ibalulekileyo, efanele ixesha, ingqalelo nokuzinikela.
Sindleka okanye dibana noMenzi-qela
Funda ngendlela yokwakha izakhono zentsebenziswano kwi-intanethi
Funda imanifesto epheleleyo